ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှ ရိုလာကိုစတာ စီးနေစဉ် တန်းလန်းရပ်သွား အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၀၂
ရိုက်ကွင်းမှာ ပတ်ထရစ်ရှာ (စူးရှနိုင်) ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို လိုက်နှောက်ယှက်တဲ့ ဂွမ်းပုံ နဲ့ ဇေရဲထက် အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၈:၃၃
သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ အောင်ရဲလင်းတို့ရိုက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားအသစ်မှ ပုံရိပ်များ အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၁၄
မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဗျို့လို့ ပြောတဲ့ အေးမြတ်သူ.... အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၀၅
ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ အလန်းစား ဓာတ်ပုံတွေ.... အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၄၅
မော်ဒယ်မင်းသားတွေ ထိုင်ငိုသွားလောက်တဲ့ နုပျိုလန်​းဆန်​းနေတဲ့ မင်းဦး အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၃၆
မိုးယုစံရဲ့မင်္ဂလာအကြိုပုံရိပ်များ အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၂၆
မျက်နှာပေါ်မှာ ယောကျာ်းလိင်တံပုံဆွဲပြီး ပုံဖော်မိတ်ကပ်လိမ်းတာ ပိုပြီး ထိရောက်တာလား အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၁၉
အလုပ်ကနေအိမ်အပြန် မူးယစ်ဆေးသမားများမှ ရိုက်လုသောကြောင့် လူငယ်တစ်ဦးသေဆုံး အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၁:၅၈
အင်တာနက် စွဲနေသော ၁၆နှစ်သမီးက အမေကို ပြန်သတ် အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၁:၄၈
သခင်ပြန်အလာကို လမ်းဘေးမှာ မျှော်နေတဲ့ ခွေးလေး ကားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွား အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၀:၅၇
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရင်းရုတ်တရက်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ မင်းဦး အင်္ဂါနေ ၂၇ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၀:၁၈
မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအား မွေးစားမည်ဟုပြောဆိုကာ အိမ်အကူအဖြစ် ခိုင်းစေပြီး လုပ်ခလာစာမပေးဘဲ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သူ မိသားစုများအား လူကုန်းကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေဖြင့် ထပ်မံအရေးယူ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၁:၄၂
GTC တတိယနှစ် ကျောင်းသူတစ်ဦး ကားအတွင်း သေဆုံးနေ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၄၂
နေ့တိုင်း အင်္ကျီဆင်တူဝတ်တဲ့ အဘိုးအဘွား စုံတွဲ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၂၈
မြန်မာ့ သနပ်ခါး ကို ကြော်ငြာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ရဲ့ ဗီဒီယို ကြည့်ရူ့သူ သန်းကျော်...... တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၁၀
သံဝေဂတွေ ရသွားပြီး ဆရာဝန်ဘဝကို စွန့်လွန့်ကာ သာသနဘောင်မှာ အားထုတ်နေတဲ့ ဆေးကျောင်းသူလေး တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၃၂
ပရိသတ်ရုံပြည့်ရုံလျှံလာရောက်အားပေးခဲ့သည့် Rဇာနည်၏ တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၃၂
ပြင်ဦးလွင်တောင်တက်လမ်းတွင် ပြိုင်ကားလေ့ကျင့်နေသဖြင့် ဝေဖန်မှုများနှင့်ကြုံနေရ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၄၅
တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲများလုပ်မည့် လင်းလင်း တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၄၃
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရိုးကျီးပေါင်းနှင့်အစာအိမ်ဝေဒနာ ခံစားနေရ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၄၀
သိန်းတစ်ထောင်တန်ဖိုးရှိ Taxiပေါ်တွင်မေ့ကျန်ခဲ့သော ရတနာပစ္စည်းများအား ပြန်လည်လာပေးအပ်သောယာဉ်မောင်းဖြစ်သူအား ပစ္စည်းပိုင်ရှင်မှ ကားတစ်စီးဝယ်ပေး တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၃၇
အလှ ကြိုက်တဲ့ မမတွေ အတွက် အမျိုးသား အင်္ဂါပုံစံ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၄၄
နိုင်​ငံ​တော်​၏ အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိလ်​ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်​းစုကြည်​ ကျန်​းမာ​ရေး စိုးရိမ်​စရာ မရှိ တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၂:၂၀
အိမ်ပြတင်းပေါက်ကနေ သံချိတ်နဲ့လာခိုးတဲ့ သူခိုး တနလာင်္နေ ၂၆ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၂:၀၅
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ selfieရိုက်ကာ ပုံများတင်သောကြောင့် ဝေဖန်မှုခံခဲ့ရသော House Surgeon ပြန်တောင်းပန် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၃၅
ဆရာမ ချောချောလေးတွေ အလုပ်ခန့်ထားတဲ့ တရုတ်ကတက္ကသိုလ် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၅၂
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးမြွေကြီးလား ? တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၀၅
taxi ဌားစီးလျှင် တခြားခရီးသည်ပါက သတိထားပြီး ရှောင်သင့် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၅၂
မြန်မာနှစ်ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသားသုံးဦး အခန်းထဲမှ အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ထားသည့့် အမျိုးသမီးအလောင်းတွေ့ရှိ တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၂၀
ကားပေါ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ရတနာထုပ်ကို ပြန်ပေးတဲ့ Taxi သမား ကိုသန်းထိုက်ကျော် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၀၂
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောထပ်မံလှုပ်ရှားပါက ရန်ကုန်တွင်ဘေးအန္တရာယ်ကြီးမားစွာ ကျရောက်နိုင် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၃၈
သင်မသိသေးတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်အကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၃၆
လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် နုတ်ထွက်ရန်ဆန္ဒပြကြမည် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၃၆
ဓမ္မစကြာရွတ်နေသည်ကို အသံချဲ့စက်ကြိုးဝင်ရောကြ်ဖုတ်ခဲ့သည့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသားကို ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် အမှုဖွင့် တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၃၃
ကိုကို ပိုင်းလော့နဲ့ လေယာဉ်မယ်ပုံစံ မင်္ဂလာပွဲအကြို ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ မိုးယုစံတို့စုံတွဲ တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၃၁
နေမင်းနဲ့ အေးမြတ်သူတို့က ချစ်သူတွေဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့ ဓာတ်ပုံ...... တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၂၇
ဘုန်းကြီးက ဆိုက်ကားနင်းပြီး စီးပွားရှာနေတာလား? အဖြစ်မှန်ကိုသိရင် သင်လန့်သွားမှာပါ။ တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၁၉
အဖဂန်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး မုဒိန်းကောင်နှင့် ပြန်လက်ထပ်ရ တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၂:၃၇
ဘာလို့ကားပုံစံ အုတ်ဂူလုပ်ပေးထားရတာလဲ ? တနင်္ဂနွေနေ ၂၅ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၁:၄၀
Victoria Secret က မော်ဒယ်တွေတောင် ရှုံးလောက်အောင်လှတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက တောသူမလေး..... စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၁:၄၇
လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုး ဆေးရုံတက်နေရ စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၁:၁၃
မိမိကို အနိုင်ကျင့်တဲ့သူ၏ ဝှေးစေ့ကို ဖြတ်ပစ်ကာ ထိုသူ့ကို ပြန်စားခိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်..... စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၀၁
လမ်းပေါ်တွင် ရေချိုးအရွဲ့တိုက်သည့် ကရင်မိန်းကလေးကြောင့် ခရိုင်ဝန်မှ လမ်းပြင်ရန် အမိန့်ထုတ် စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၄၄
မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမ်ဆိုင်းလု စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၅၂
သချႋင်းမြေသိမ်းဆည်း တာနှင့် ပတ်သက်၍ သေလွန်ပြီး ဝိညာဉ်များကိုပါခေါ်ယူက ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွား စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၁၂
ခိုလှုံရာရိပ်သာမှ အဖွားကို အိမ်ဖော်အဖြစ် ခိုင်းစေရန် သွေးဆောင်သွား စနေနေ့ ၂၄ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၀၀:၁၄
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်မှ ဓမ္မာစကြာရွတ်နေစဉ် ဓမ္မာရုံထဲဝင်လာပြီး Sound box ကြိုးများ ဖြုတ်သွား သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၃:၅၁
မြောက်ဒဂုံ အိမ်အကူနှိပ်စက်မှု သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၃:၄၂
လေအိတ်များကို တရုတ်ပြည်မှ ကုန်တိုက်များတွင် ရောင်းချ သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၁၀
သတင်းထောက်ကိုဆွေဝင်းအား ခြိမ်းခြောက်ခံရလျှင် အကြောင်းကြားရန် ကျောက်တံတားရဲစခန်းမှပြောကြား သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၈:၂၂
ချစ်သူအားစာရေးပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကော့သောင်းမြို့နယ်တွင် ကြိုးဆွဲချသေဆုံး သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၄၅
ရွှေမှုန်ရတီဟာအလှဆုံးပဲလား သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၄၂
အိမ်အကူမိန်းကလေးအမှုတိုင်ကြားခဲ့သူအား သမ္မတဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်မည်ဟုဆို သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၃၉
လမ်းမပြင်ပေးသဖြင့် လမ်းပေါ်တွင် အရွဲ့တိုက်ရေချိုးသည့် ကရင်မိန်းကလေး သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၃၁
သေခါနီးသူ့ခွေးလေးရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ သခင် သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၀၄
ပလတ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်လိုက်မှ ပိုရုပ်ဆိုးသွားတဲ့ ထိုင်းကမော်ဒယ် ဆေးရုံကို တရားစွဲ သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၄၀
တည်းခိုးခန်းများ မြန်မာနာမည်ပြောင်းရမည်ဟု စည်ပင်မှအကြောင်းကြား သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၄၂
သမီး၂ယောက်ကို ၁၄ နှစ်ကြာနှိပ်စက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ အဖေ သောကြာနေ ၂၃ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၀၆
အာဂျင်တီနားလွှတ်တော်ရှေ့ အမျိုးသမီးများမှ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် ဆန္ဒပြ ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၁:၃၄
2AM က ဂျင်ဝူး နှင့် Wonder Girls ထဲက ရန်နီအတွဲခုတ်နေတာ ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း.... ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၄၄
ကိုယ်ဝန် ငါးလ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေ ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၁၇
ဦးမန်းဝင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျောက်ကပ်ဆေး ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၈:၂၆
ငါးလဘဲရှိသေးတဲ့ မြေးအတွက် ဝက်ဝံရုပ်အကြီးကြီး ဝယ်ပေးတဲ့ အဖိုး ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၈:၂၂
ကမ္ဘာအနှံခရီးထွက်ရင်း တစ်လ ဒေါ်လာ ခုနှစ်သောင်း လည်ပတ်နေသော စီးပွားရေးလည်းလုပ်နေသော ၂၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၀၄
၁၂ နှစ်သား ၂ယောက်မှ ၆နှစ်သမီးကို မုဒိန်းကျင့်သည်ဟု တရားစွဲခံရ ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၃၄
ကားပါကင်နေရာအတွက် ကလေးကို မိနစ်၂၀ လမ်းပေါ်မှာ ချထားခဲ့တဲ့အမေ ကြာသပတေး နေ ၂၂ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၀၇
ရန်ကုန်မြို့ မလုံခြုံတော့ဘူးလား ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၅၃
ရေဘဝဲအရှင်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်က မော်ဒယ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၂၃
ရောဘတ် ပတ်တင်စန် အခြောက်ဆိုတဲ့ သတင်းက အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြား.... ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၃၇
မိန်းမရှိတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ ဟောင်ကောင်မှ မိန်းကလေး ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၉:၃၆
စက်တင်ဘာ၊ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် ရုံတင်မဲ့ ဖွေးဖွေးနှင့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တို့ ပါတဲ့ ကာလာစုံသင်ခန်းစာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၈:၁၇
ဖေဖော်ဝါရီမှာ မင်္ဂလာ​ဆောင်​တော့မယ် မြင်​့မြတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၀၃
ပီဇာသရဲတွေအတွက်ထွင်လိုက်တဲ့ ပီဇာထည့်တဲ့အိတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၀၀
ဂျပန်မှ အမြွှှာကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်နေတဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၀၃
မျက်နှာ ၂ခုပါတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်း နွားပေါက်လေး ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၄၄
ဘရတ်ပစ် ဖောက်ပြန်လို့ ဂျိုလီနဲ့ကွဲခဲ့တာလား ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၂:၁၆
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်အမှုမှ တရားခံများကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ ၂၁ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၀၈:၃၆
အင်ဂျလီနာဂျိုလီမှ ဘရတ်ပစ်ကို ကွာရှင်းခွင့်တောင်း အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၃:၀၉
ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းလုံးကို တစ်လ ၂သိန်းခွဲတည်းနှင့် နှစ်၃၀ စာချုပ်ချုပ်ထား အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၃၈
ည ၁၂ နာရီကြီး Pokemon Go ကစားနေတုန်း ဓားပြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၀၀
ပိုက်ဆံနှင့် ကြေအေးခဲ့သော အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်မှ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ တရားပြန်စွဲ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၂၅
အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်နှင့် kpopper တွေရဲ့ ပွဲ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၁၇
ဂူဂျွန်ဖြိုး နဲ့ တေလာဆွစ်ဖ် တို့ တွဲနေတာလား? အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၂၂
နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ အလန်းစားဓာတ်ပုံများ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၅၁
နာမည်ကြီး Celebrity တွေရဲ့ photoshop မလုပ်ခင်နဲ့လုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံများ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၄၆
ပထမနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအား ရည်းစားဖြစ်သူမှ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ကာ မြစ်ထဲသို့ပစ်ချ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၃၉
Japan ရဲ့အလှဆုံး Taxi Driver အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၃:၀၃
တရုတ်မှ အချမ်းသာဆုံးခွေး Iphone 7s ၈လုံးရ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၂:၁၈
ကြောင်သေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အိတ် $1400 နဲ့ရောင်းချ အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၀:၄၀
သခင်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့အထိ အားတင်းပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ခွေးလေး အင်္ဂါနေ ၂၀ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၀:၁၀
ရန်ကုန် လမ်း ၄၀ တွင် အိမ်အကူ မိန်းကေလးငယ် ၂ ဦး နွိပ်စက်ခံရမှု ဖြစ်ပွား တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၂၀:၁၅
Fault In Our Stars ဇာတ်ကားကဲ့သို့ လက်ထပ်ခဲ့သည့် စုံတွဲ အမျိုးသားသေဆုံး တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၇:၁၀
ကလေးတွေကို ကျောင်းမထားဘဲ ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးထွက်တာကိုခေါ်သွားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၆:၂၄
နယူးယောက်မြို့ Manhattan က လူစည်ကားရာ အရပ်မှာ စနေနေ့ညက လူပေါင်း ၂၉ ယောက်ကို ဒဏ်ရာရစေတဲ့ ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ခံပြောကြားမှု တခုကို FBI ထောက်လှန်းရေးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၂၄
မပြေလည်သော Relationship များကိုတည်တံခိုင်မြဲသွားစေသည်မှာ ကျေးဇူးတင်စကား၊ချီးကျူးစကားပြောပေးခြင်းကြောင့်ဟု UK သုတေသနပညာရှင်များမှ ပြောကြား တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၂၃
နှစ်ပေါင်း ၆ဝကျော်က ပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့တဲ့ ပုံစံတူ နှစ်ထပ် bus ကားကို လက်ဆောင်အဖြစ် ဇနီးသည်ကိုပေး တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၂၂
Miss Global 2016 talent ပြိုင်ပွဲမှ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်စဉ် တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၅:၁၉
ပြင်ဦးလွင်မှာ သီချင်းသွားဆိုခဲ့တဲ့ ဝိုင်းလေး တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၅၉
ချစ်သူဝေ တို့ ချဉ်ခြင်း တက်ပုံများ..... တနလာင်္နေ ၁၉ စက်တင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၄:၅၃
Page generated in 2.2134 seconds with4database query and 1 memcached query.